macOS 11.3 wuxuu hagaajiyaa cilladaha amniga ee nidaamka hawlgalka | Waxaan ka socdaa mac
macOS 11.3 wuxuu hagaajiyaa cilladaha amniga ee nidaamka hawlgalka
Apple la sii daayay macOS 11.3 qof walba nooca shalay; Kadib dhowr betas iyo tijaabooyin dhowr ah iyo caawimaadda soo-saareyaasha, waxay ahayd waqtigii la bilaabi lahaa nooca cusub ee nidaamkan hawlgalka dadweynaha guud. Noocaan cusub, balastar ayaa la sii daayay kaas oo hubiya in adeegsadayaasha wuxuu ka badbaadi doonaa daloolka amniga taas oo jirtay oo khatar galisay xogta isticmaaleyaasha Mac.
Iyadoo la sii daayo nooca cusub ee macOS 11.3, Apple hagaajiyay cillad u oggolaan laheyd kuwa wax weeraraya inay ka gudbaan farsamooyinka amniga laga bilaabo Mac iyada oo loo marayo dukumiinti xun. Daloolkan nabadgelyadu wuxuu u oggolaaday kuwa wax weeraraya inay abuuraan codsi xun oo isu ekaysiin kara dukumenti. Tani waxaa soo wariyay TechCrunch. Cedric Owens oo ah cilmi baaraha amniga ayaa markii ugu horeysay soo helay cayayaanka bishii Maarso.
Sida laga soo xigtay Cedric, oo qaladka ku xaqiijiyey tijaabooyinkiisa. Waxay abuurtay barnaamij caddeyn-u-fikrad ah oo ka faa'iideystay cilladda si loo bilaabo barnaamijka Calculator-ka. Wuxuu awooday inuu go'aamiyo taas: “Dhammaan isticmaalaha waa inuu sameeyaa waa guji laba jeer iyo digniin ama ogeysiis lama soo saari doono laga bilaabo macOS. »
Barnaamijkan demo wuxuu ahaa mid aan dhib lahayn. Si kastaba ha noqotee, qof leh ujeedooyin kale oo daacadnimo ka yar ayaa ka faa'iideysan lahaa u nuglaanshaha inuu meel fog ka helo xog qarsoodi ah ama macluumaad kale on mashiinka isticmaalaha iyaga oo ku khiyaaneeya iyaga oo gujinaya dukumiinti been abuur ah.
Apple ayaa sheegtay inay ku xallisay cilladda macOS Big Sur 11.3, oo ah shirkadda weyn ee tiknoolajiyadda Cupertino ay sii daayeen Isniintii. Sii deyntaas ka sokow, Apple waxay sidoo kale soo saartay sharooto si loogu xaliyo cilladda macOS Catalina iyo macOS Mojave. Taasi waa sababta cusbooneysiintu ay muhiim u tahay waana taas sababta ay lagama maarmaanka u tahay inaadan lumin waqti badan iyo cusbooneysii noocyada cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » macOS 11.3 wuxuu hagaajiyaa cilladaha amniga ee nidaamka hawlgalka
Fiidiyow cusub oo Apple ah si loo dhiirrigeliyo asalka Apple TV + Nuxurka